I-Farnished House Studio enokungena Kwangasese - I-Airbnb
I-Farnished House Studio enokungena Kwangasese
San Antonio, Texas, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Destin
U-Destin Ungumbungazi ovelele
Kuvuselelwe ngokumangalisayo igumbi lokulala eli-1/1 lokugeza eline-studio elinefulethi eli-1 ngaphesheya komgwaqo ukusuka emfuleni iSan Antonio kanye namabhulokhi ambalwa ukusuka esifundeni saseKing William. Hamba kalula uye e-Blue Star Brewery noma izindawo zokudlela eziningi eziseduze, noma gxuma kusikuta, i-Uber noma ibhayisikili ukuze uvakashele i-Historical Missions eseduze, i-Rirwalk, i-Alamo, i-Convention Center, i-Historic Market Square noma i-Alamodome.
Indawo yokuhlala negumbi lokulala ihlanganiswe ibe yi-17' x 14' isikhala esivulekele ekhishini nendawo yokudlela. Zonke izinto ezintsha zensimbi ezingenasici, izinto zokubala zokhuni, i-pantry, uphahla oluphezulu, amaphansi okhuni laminate. Ukuqasha kufaka yonke impahla, impahla yasekhishini, izinsiza, amanzi, i-inthanethi, i-Roku TV. Hamba ngezinyawo, ugibele ibhayisikili, noma uhambe ngebhayisikili uye e-Blue Star eseduze, e-Rirwalk, ezindaweni zokudlela ze-hip. Indawo yokungena yangasese ehlukene kanye nezindawo zokupaka zingemuva kwekhaya.
Umbhede omkhulu ongu-1, imibhede yomoya engu- 1
4.75 · 4 okushiwo abanye
Cishe ngeke ungibone noma umkami ngesikhathi sokuhlala kwakho, kodwa siyatholakala uma ungase udinge noma yini. Ungase ubone isevisi yokwakheka kwezwe yenza ukunakekelwa okujwayelekile ngezikhathi ezingavamile.
UDestin Ungumbungazi ovelele